Ububanzi. I-Stone Palace-igumbi eliphindwe kabini(inc.Breakfast)1-2PAX - I-Airbnb
Ububanzi. I-Stone Palace-igumbi eliphindwe kabini(inc.Breakfast)1-2PAX
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguIsa
Iihotele zesiNtu zase Kapadokiya. Ihotele yenziwe ngesandla ukusuka kwilitye lendalo elihlaziyiweyo laseKapadokiya. Ihotele yaseKapadokiya iStone Palace Goreme, inamagumbi ayi-12 anesitayile somntu ngamnye aneenkcukacha zamatye ezenziwe ngesandla. Khetha kumagumbi ethu asemgangathweni okanye ungene kwigumbi le-jaccuzzi okanye kwigumbi elinendawo yomlilo. Sikwanayo negumbi lesidlo sakusasa eliphezulu, sonwabele i-terrace yethu nangaliphi na ixesha losuku.
- 24/7 idesika yangaphambili
- Ukugcinwa kwendlu yonke imihla kubandakanyiwe kwireyithi yegumbi
- Akukho Ubuncinci bemfuno yokuhlala
Bona imbonakalo yomhlaba eyahlukileyo ukusuka kwindawo entle.
Ihotele eKapadokiya Stone Palace
ziihotele zesiNtu zaseKapadosiya. Ihotele yenziwe ngesandla ukusuka kwilitye lendalo elihlaziyiweyo laseKapadokiya. Ihotele yaseKapadokiya iStone Palace Goreme, inamagumbi ayi-12 anesitayile somntu ngamnye aneenkcukacha zamatye ezenziwe ngesandla. Khetha kumagumbi ethu asemgangathweni okanye ungene kwigumbi le-jaccuzzi okanye kwigumbi elinendawo yomlilo. Sikwanayo negumbi lesidlo sakusasa eliphezulu, sonwabele i-terrace yethu nangaliphi na ixesha losuku.
Onke amagumbi ahonjiswe kakuhle, acocekile, kwaye ayindawo epholileyo yokuhlala. Indawo yokutyela ibonelela ngesidlo sakusasa saseTurkey kunye neti encomekayo, ikofu kunye namanzi anokonwatyelwa kumagumbi. Inkqubo yokufudumeza esembindini yehotele yethu ikuvumela ukuba usebenzise amanzi ashushu iiyure ezingama-24 ngosuku, nakubusika obuqhaqhazelisa amazinyo! Ihotele iCapadocia Stone Palace Goreme ikwindawo esembindini weGoreme, kufutshane neendawo zokutyela ezinkulu kunye neevenkile. Luhambo olufutshane oluya kwimyuziyam evulekileyo kunye neentlambo zase Kapadokiya. Singalungiselela zonke iimfuno zakho kubandakanya ukhenketho lwasekhaya, iinqwelomoya zebhaluni okanye amanye amalungiselelo okuhamba. Silishishini eliqhuba usapho kwaye sinikezela ngobubele obubalaseleyo baseTurkey. Kangangamawaka eminyaka abantu bebehleli emiqolombeni eKapadokiya.
Ihotele yethu ikuvumela ukuba ube nethuba elikhethekileyo lokuhlala kunye namava okuphila emqolombeni.
Ihotele eKapadokiya Stone Palace Goreme ikuvumela ukuba ube namava oku kanye ebomini ithuba lokuhlala Goreme kwaye ubone amagumbi emqolombeni emangalisayo kunye neetshimini zentsomi abantu baseKapadokiya bahlala iinkulungwane. Ngendawo evulekileyo yomoya eluphahleni, unokonwabela imbonakalo entle yeRose kunye neRed Valleys kwikona entle ethe cwaka yedolophu. Ithafa lethu yindawo entle yokuhlala kwaye uphumle kwaye wonwabe ukutshona kwelanga ngelixa usela iwayini yakho, ikofu okanye iti.
4.82 out of 5 stars from 212 reviews
4.82 · Izimvo eziyi-212
Ifakwe phakathi kwe "fairy chimney" yokwakhiwa kwamatye, yidolophu yaseKapadokiya, ummandla wembali weTurkey. IkwiPhondo laseNevşehir kuMbindi weAnatolia kwaye inabemi abamalunga nama-2,000 abantu.
Amagama angaphambili ale dolophu ibiyiKorama, iMatiana, iMaccan okanye iMachan, kunye neAvcilar. Xa iGöreme Valley ekufutshane yonyulwa njengendawo ebalulekileyo yabakhenkethi, "iziko" kulo lonke ukhenketho eKapadokiya, igama ledolophu latshintshwa laba yiGöreme ngezizathu ezibambekayo. Phakathi kweendawo zembali zaseGöreme ziicawa zeBezirhane, iDurmus Kadir, i-Ortahane, kunye neYusuf Koc, ukongeza kwiCawe yaseTokali ehonjiswe ngokutyebileyo, iCawa ye-Apple, kunye nenani lamakhaya kunye nezindlu zamajuba ezikrolwe ematyeni edolophu.
Umbuki zindwendwe ngu- Isa
Siya kukuvuyela ukukunceda kuyo yonke imisebenzi ejikeleze iKapadokiya. Nceda ungakhawulezi ukubuza, sikulungele ukukwazisa.